အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: "ဖား " ဖြစ်သွားတဲ့ "ကျား"
ငါတို့ အမျိုးတွေရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တွေပေါ့
သန်မာခြေ ကိုယ်လုံး..တတောလုံးရဲ့ ဘုရင်..
ကျားနဲ့ ဆင် လယ်ပြင်မှာတွေ့ 
ကျားကြီး ခြေရာကြီး.. ကျားရဲရာ ကြမ္မာမယိုးသာ
ကျားရှေ့ မှောက်ရက်လဲ..ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာရာရ
ကျားလည်းကြောက်ရ၊ ကျားချေးလည်း ကြောက်ရ
ကျားသေကို အသက်သွင်းလို့ စင်းစင်း သေရ
ကံကောင်းတဲ့ ကျား သွားရင်း သမင်တွေ့
ကျားချင်းကိုက်ရာ သမင်လမ်းကူးမှား ဒီစကားပုံတွေ..အဖေတို့ ကြောင့်ရေးကြတာပေါ့
အရင်ကတော့ ကျားဆိုတာ.ဘယ်လောက် အရေးပါထားသလည်း
မင်းကြီးတော်တွေ နေတာ..ရန်ကုန်တိရိစ္ထာန် ဥယျာဉ်
မင်းအဒေါ်တွေက ဆပ်ကပ်ထဲ show girl တွေ ကော့မော့
ငါသာ မသေချင်လို့ တောမပြောင်း..
ဒီမြစ်ဆုံဇောင်းမှာ မင်းအမေနဲ့ အကြောင်းပါ။
ခုတော့ အဖေ့ လက်ထက်
ကျွန်းတွေ ခိုးခုတ်..ရွှေတွေ ခိုးထုတ်
ထင်းတောတွေခုတ် မီးသွေးဖုတ်တဲ့ စစ်သား
မျိုးပြုတ်သွားတဲ့ သမင် ဒရယ်ချေ
အဖေနဲ့သားရဲ့ အစာအိမ်
ကျားစာ တောထဲမှာ ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။
စစ်တပ်က ရွာမီးရှို့ ..တိုင်းရင်းသားတွေ ရွာလုံးဖြုတ်
ကျားစာ ရွာထဲမှာ ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။
တစ်တောလုံး တစ်တောင်လုံး ပိုင်ဖူးခဲ့တဲ့ကျား
နအဖ လက်ထက်မှာ အဖေ တို့ဟာ
ကမ္ဘာပေါ် တဖြေးဖြေး ကျားက ရှားလာပြီ။
မှောင်ခို ဈေးကွက် ..
ဘုရားရေ ကယ်ပါ မြန်မာပြည်မှာ..
ကျားအရောင်ရေ ၁၅၀ သာကျန်တော့တယ် တဲ့..
သားရေ မင်းဖို့ အိမ်ထောင်ဘက်
ကျားမတောင် ရှာရတော့မယ် မထင်ဖူး..
အဖေ မြင်ရတော့မယ် မထင်ပါဘူး.
သေချင်တဲ့ ကျား မပြောင်းချင်လည်း တောပြောင်း..ခုတော့ ကျားရဲလည်းသေ တောလည်းကြေပြီ။
ရွှေကျားမရှိတော့တဲ့ ပုံပြင်..ကလေးတွေ ဘာထင်ကြမလည်း.
မနက်ဖြန်မှာ..ငါ့ အလောင်းကို ဒေါ်လာဈေးခေါ်
အဖေ့ အရိုး၊ အရေတွေ မှောင်ခိုဈေး..
ငယ်ပုံပြင်ထဲက ကျားတွေ အစဉ်သတိရတယ်။ ငယ်ငယ်က အဖေ့ပေါင်ပေါ် အိပ်.သူပြောတဲ့ ရွှေယုန်နဲ့ ရွှေကျား သက်ကယ်ရိတ်သွားတဲ့ ပုံပြင်နားထောင်ရင်း ရယ်သံချိုချိုနဲ့ကျမ အင်မတန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးပါ တယ်။ တနင်္ဂနွေ ပျော်ပွဲစား ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ရုံက ကျားရုံနားမှ ဆော့ခဲ့ဖူးပါ တယ်။
ကျမတို့မြေးမြစ်တွေ လက်ထက်..သူတို့ ကို ရွှေကျားဆိုတာ ဘယ်အရာ… ပြစရာ ကျားလေး တစ်ကောင်မှ တောင် မြန်မာပြည်မှာမရှိမှာတော့ စိုးရိမ်စိတ် တကယ်ဖြစ်မိပါတယ်။ အစိုးရမင်းဆိုသူများရယ်..လူကိုသတ်မှ နိုင်ငံကိုချစ်တာ မဟုတ်ပါ။ ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ တောတောင် ရေမြေသဘာဝ..ထိမ်းသိမ်းပေးဖို့သတိမေ့ နေကြတာကို သတိပြုပေးကြပါ။ လောကမှာ ငါ့ဗိုက်ပြေ့ရုံ တခုထည်းကြည့်ပြီး အများရဲ့ အနာဂတ်ကို ရောင်းစားရင်..ဒီ သဘာဝလောက ပျက်စီးတဲ့ အခါ လူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ မျိုးဆက်တွေ ပါ အတူတူ ခံစားရမှာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ငွေတွေ စိန်တွေ ရှိတာလေးနဲ့ ..ဘာမှလုပ်မရတဲ့အရာတွေ အများကြီးမို့ချစ်စရာလူသားတွေ ရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့ မဖျက်ဆီးပါနဲ့ …
ကျားအရေအတွက်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ တဖြေးဖြေးနည်းလာပါပြီ။ အထူးဂရုပြု၍ မျိုးမပြုန်းတီးအောင် ကာကွယ်ပေးကြပါ။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ကြာသပတေးနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၂၁ မိနစ်
ချင်းမိုင်။ ။ ပြည်တွင်းဥပဒေများ မပြည့်စုံ မလုံလောက်မှုနှင့် ဥပဒေအရ တိကျစွာ အရေးယူမှုများ မရှိသည့်အတွက် မြန်မာ့တောကြောင် များ ၏ အရေနှင့် အခြားခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများသည် မကြာခဏပင် မြန်မာ့ဈေးကွက် အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်ဟု တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန်များ ကုန်သွယ်မှုစောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့ကြီးတခု၏ အသေးစိတ် လေ့လာချက် တရပ်က ဆိုထားပါသည်။
ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သော အရှေ့တောင်အာရှ ထရက်ဖစ် (TRAFFIC Southeast Asia Report) အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာတွင် အနည်း ဆုံး တောကြောင်ကောင်ရေ ၁၁၅၈ မှာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ့ ဈေးကွက်များအတွင်း အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်တော့မည့် မျိုးစိတ်များ ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကွန်ဗင်းရှင်းတရပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးထား သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အာဏာပိုင်များသည် ဤ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် တိရိစ္ဆာန် အစိတ်အပိုင်းများ တရားမ ဝင်ရောင်းဝယ်မှုကို ကာကွယ်ရန် ဥပဒေအရ တာဝန်ရှိပါသည်။
သို့သော် ဤပိတ်ပင် တားဆီးထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင် ဆိုင်ရှင်များက ရဲရဲတင်းတင်း လွတ်လွတ် လပ်လပ် ရောင်းဝယ်နေကြသည်ကို ကြည့်လျှင် "ဤတရားမဝင် ကုန်သွယ် ရောင်းဝယ်မှုကို တားဆီးရန် တလေးတစား အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု မရှိကြောင်း ထင်ရှားပြီး၊ ယခုပင် မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မည့် အန္တရာယ် ရှိနေပြီဖြစ်သည့် မျိုးစိတ်များကို ဤရောင်းဝယ်မှုများ က ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း မီးမောင်း ထိုးပြနေသည်" ဟု မလေးရှားအခြေစိုက် အဖွဲ့ကြီးက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ပြောထားပါသည်။
လေ့လာမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကာလအတွင်း ဈေးကွက်အတွင်း အနည်းဆုံး ကျား ၁ဝ၇ ကောင်ကို ဈေးကွက်အတွင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး TRAFFIC ၏ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်မည့် အန္တရာယ်ရှိနေသည့် တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကျား ကောင်ရေမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်ရေ ၁၅ဝ ထက် မပိုနိုင်တော့ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:43 AM